KANA tikafa, Mwari achada kutimutsa here, kureva kutidzosera kuupenyu?— Murume akanaka Jobho aidavira kuti Mwari aida. Saka Jobho paakafunga kuti akanga oda kufa, akati kuna Mwari: “Maizodana, ini ndikakupindurai.” Jobho akataura kuti Jehovha Mwari aizoshuva, kana kuti kuda zvikuru kumumutsa.—Jobho 14:14, 15.
Jesu akangofanana naJehovha Mwari, Baba vake. Jesu anoda kutibatsira. Apo mumwe murume airwara nemaperembudzi akati kwaari, “Kana muchida henyu, munogona kundiita kuti ndichene,” Jesu akapindura kuti: “Ndinoda.” Uye murume wacho akabva aporeswa.—Mako 1:40-42.
Jehovha anoratidza sei kuti anofarira vana?
Jesu akadzidza kuna Baba vake kuda vana. Kare kare Jehovha akashandisa vashumiri vake kaviri kumutsa vana vaduku. Eriya akateterera Jehovha kuti amutse mwanakomana womukadzi akanga aitira Eriya zvakanaka. Uye Jehovha akazviita. Jehovha akashandisawo muranda wake Erisha kumutsa mukomana muduku.—1 Madzimambo 17:17-24; 2 Madzimambo 4:32-37.
Hazvifadzi here kuziva kuti Jehovha anotida kudaro?— Haangotifungi tiri vapenyu chete. Anotiyeukawo kana tikafa. Jesu akataura kuti Baba vanotoona vakafa vavanoda sevapenyu! (Ruka 20:38) Bhaibheri rinoti ‘rufu kana upenyu kana zvinhu zviripo zvino kana zvinhu zvichauya hazvigoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari.’—VaRoma 8:38, 39.
Jesu paakanga ari pasi pano, akaratidza kuti Jehovha ane hanya nevana vaduku. Uchayeuka kuti Jesu akatora nguva yokutaura nevana pamusoro paMwari. Asi waizviziva here kuti Mwari akapa Jesu simba rokudzosa vaduku kubva kuvakafa?— Ngatitaure nezvenguva apo Jesu akamutsa mumwe mwanasikana aiva nemakore 12 womurume ainzi Jairosi.
Jairosi anogara nomudzimai wake nomwana wavo mumwe bedzi pedyo neGungwa reGarireya. Rimwe zuva musikana muduku uyu anorwara zvikuru, uye Jairosi anoona kuti achafa. Anotanga kufunga nezvaJesu, murume uya anoshamisa uyo Jairosi akanzwa nezvake anogona kuporesa vanhu. Saka Jairosi anoenda kunomutsvaka. Anowana Jesu ari pedyo neGungwa reGarireya, achidzidzisa vanhu vakawanda.
Jairosi anopinda nomukati meboka revanhu onowira patsoka dzaJesu. Anoti kuna Jesu: ‘Kasikana kangu karwara zvikuru. Mungauya kuzokabatsira here ndapota? Ndapota uyai.’ Pakarepo, Jesu anoenda naJairosi. Boka revanhu rauya kuzoona Mudzidzisi Mukuru rinoteverawo. Asi pashure pokunge vafamba, vamwe varume vanouya vachibva kumba kwaJairosi vomuudza kuti: “Mwanasikana wenyu afa! Muchiri kunetserei henyu mudzidzisi?”
Jesu anonzwa varume vacho vachitaura kudaro. Anoziva kuti Jairosi asuruvara sei nokurasikirwa nomwana wake mumwe bedzi. Saka anomuudza kuti ‘Usatya. Tenda Mwari bedzi, uye mwanasikana wako achanaya.’ Vanoramba vachienda kusvika vasvika kumba kwaJairosi. Pano shamwari dzemhuri yacho dziri kuchema. Vasuruvara kwazvo nokuti shamwari yavo duku yafa. Asi Jesu anovaudza kuti: ‘Musachema. Muduku uyu haana kufa, asi akarara.’
Jesu paanotaura izvi, vanhu vanotanga kuseka, nokuti vanoziva kuti musikana wacho afa. Saka unofunga kuti nei Jesu achiti akarara? Unofunga chidzidzo chipi chaanoda kudzidzisa vanhu?— Anoda kuti vazive kuti rufu runogona kuita sehope huru. Anoda kuvadzidzisa kuti kuburikidza nesimba raMwari, anogona kudzosa munhu akafa kuupenyu nyore nyore sezvatinoita tichimutsa munhu akarara.
Tinodzidzei pakumutsa kwakaita Jesu mwanasikana waJairosi?
Jesu anoita kuti vanhu vose vabude, kunze kwevaapostora vake Petro, Jakobho, uye Johani nababa naamai vomusikana wacho. Zvino anoenda kune mwana muduku uyu. Anomubata ruoko rwake oti: ‘Musikana, muka!’ Uye pakarepo anomuka otanga kufamba! Baba vake naamai vake vanofara zvikuru.—Mako 5:21-24, 35-43; Ruka 8:40-42, 49-56.
Zvino funga izvi. Sezvo Jesu aigona kudzosa musikana muduku iyeye kuupenyu, anogona kudarowo kune vamwe here?— Unofunga kuti achazviita here zvechokwadi?— Hungu, achazviita. Jesu pachake akati: “Awa iri kuuya mairi avo vose vari mumakuva ekurangaridza vachanzwa inzwi [rangu] vobuda.”—Johani 5:28, 29.
Unofunga kuti Jesu anoda kumutsa vakafa here?— Mumwe muenzaniso uri muBhaibheri unobatsira kupindura mubvunzo iwoyo. Zvinoitika rimwe zuva pedyo neguta reNaini zvinoratidza kuti Jesu anonzwa sei pamusoro pevanhu vari kuchema pamariro.
Mumwe mukadzi ari mumudungwe wemariro omwanakomana wake, boka racho sezvarinobuda muNaini. Akanga atofirwa kare nomurume wake, uye zvino mwana wake mumwe bedzi afa. Asuruvara sei! Vanhu vazhinji veNaini vari kutevera sezvo mutumbi womwanakomana wake unotakurwa uchiendeswa kunze kweguta. Mukadzi wacho ari kuchema, uye vanhu havana zvavanogona kuita kumunyaradza.
Zvinoitika kuti, Jesu nevadzidzi vake vari kuenda kuguta reNaini pazuva iri. Pedyo nesuo reguta, vanosangana neboka revanhu riri kuenda kunoviga mwanakomana womukadzi iyeye. Jesu paanoona mukadzi ari kuchema, anomunzwira tsitsi zvikuru. Mwoyo wake unorwadziwa nokusuruvara kwake kukuru. Anoda kumubatsira.
Saka nounyoro asi nenzira yakasimba inoita kuti ateerere, anoti: “Rega kuchema.” Zvaanoita zvinoita kuti vanhu vose vamutarise vachida kuziva. Jesu sezvaanoenda kumutumbi wacho, vanhu vose vanofanira kushamiswa kuti achaitei. Jesu anotaura, achirayira kuti: “Jaya, ndinoti kwauri, Muka!” Pakarepo anomuka ogara! Uye anotanga kutaura.—Ruka 7:11-17.
Fungidzira kuti mukadzi wacho anofanira kuve akanzwa sei! Waizonzwa sei nokugamuchira vadiwa vakafa vamukazve?— Izvi hazviratidzi here kuti Jesu anoda vanhu zvechokwadi uye anoda kuvabatsira?— Ingofungidzira kuti zvichava zvichifadza sei munyika itsva yaMwari kugamuchira vanhu kuupenyu!—2 Petro 3:13; Zvakazarurwa 21:3, 4.
Ko kumutswa kwomwana mumwe bedzi womukadzi uyu kunoratidzei?
Panguva iyoyo vamwe vachamutswa vachava vanhu vataimboziva, kusanganisira vana. Tichavaziva kuti ndivanaani sokungoziva kwakaita Jairosi mwanasikana wake Jesu paakamumutsa. Vamwe vachange vari vanhu vakafa mazana kana kuti zviuru zvemakore zvakapfuura. Asi Mwari haazovakanganwi, kunyange zvazvo vakararama kare.
Hazvifadzi here kuziva kuti Jehovha Mwari noMwanakomana wake, Jesu, vanotida zvakadaro?— Vanoda kuti tirarame, kwete kwemakore mashomanana bedzi, asi nokusingaperi!
Pamusoro petariro inoshamisa yeBhaibheri nokuda kwevakafa, tapota verenga Isaya 25:8; Mabasa 24:15; na1 VaKorinde 15:20-22.